TENPRO Elec-AMANDLA Sci-TECH LLC (CHINA) iphezulu-zobugcisa Sino-amazwe joint venture kunye nemfezeko ezintsha. Le nkampani ithatha "ngobugcisa nje undoqo, izinto ezintsha kwenza uthungelwano ukwabiwa ekrelekrele" njengoko bulumko ishishini lonke ixesha kwaye ephanda, ophuhlisa, uvelisa kunye ulibonayo Isixokelelwano sokusasazwa esizisebenzelayo iimveliso terminal okrelekrele njengoko novulindlela ishishini smart grid. Iimveliso iquka okrelekrele kwemida yotshintsho isilawuli of TF series (terminal feeder), ukusasazwa okrelekrele isikhululo esizisebenzelayo terminal ka-TD series, okrelekrele terminal ukusasazwa TT series, ukusasazwa umgca okrelekrele status imonitha of TM series (system), inkosi isikhululo unikezelo esizisebenzelayo kunye zombane aphakathi kunye namacandelo utshintshe nje lokuqala ombane aphezulu kunye neeseti epheleleyo yezixhobo, njl Le nkampani iye wahlanganisa iqela ezikumgangatho ophezulu iitalente zokusebenza amashishini amakhulu basekhaya angaphandle kunye edumileyo namaziko ophando lwezenzululwazi. Xa kuthethwa "ubuchwepheshe kudala elizayo", phambili kolu shishino kunye amaxesha thina, ugxininise eku sunguleni. Okwangoku, siye rhoqo ziziqhelanise utshintsho olukhawulezileyo kushishino kunye nobuchwepheshe, kwaye ziqhube ukusungula nokusebenzisa izinto ezintsha nobuchwepheshe yaye ngaloo ndlela zokuhambisa umbane, usasazo kunye namandla esizisebenzelayo izisombululo epheleleyo inkqubo kubasebenzisi kushishino amandla.
I TENPRO brand ubonelela ngeenkonzo kunye nezisombululo zobugcisa fast and epheleleyo China kunye nehlabathi ngeenxa zonke. Kwiminyaka yakutshanje, inkampani obuqhubeka imali isixa esikhulu semali kuphando imveliso kunye nophando nophuhliso kunye yeqondo eliphezulu zobuchwepheshe, ingakumbi banikezela kuphando lobuchule kunye nophuhliso lweemveliso kwicandelo smart grid lonikezelo 10KV esizisebenzelayo. Le nkampani, kunye nama-1000 square metres Uthuli-ezamahala workshop elektroniki, anazo abanamava kunye R abanezakhono & iqela D, inani mvume ubuchwepheshe elilodwa lomenzi, gcwalisa EMC (electrostatic, idlule ngokukhawuleza, kwesidingo, njl) R & D elebhu, a imveliso olunzulu engqongqo linenkqubo yolawulo lwexabiso kunye neqela esizisebenzelayo izixhobo ophezulu ezizodwa imveliso kunye nezixhobo zovavanyo nokugqibelela wezemisebenzi emva-intengiso, ukwamkela amazwe SMT nokubekwa izixhobo umatshini, yomphakamo nesezantsi lobushushu ekugugeni ibhodi PCB emva ukuwelda kunye wamwisela lobushushu eliphezulu Somphali inkqubo unyango leeseti epheleleyo yeemveliso ebonelela ezahlukeneyo telesignalization ezizinzileyo kunye noluthembekileyo kunye telemetry / telesignalization, telemetry kunye ezinjengeetheminali telecontrol feeder (TF), terminal wesikhululo (TD), terminal ukusasazwa (TT), kunye nobume umgca monitor (TM) ukwenzela ukuhanjiswa esizisebenzelayo kwaye inikezela abathengi kunye nokusebenza eliphezulu, ixabiso eliphezulu, iimveliso ixabiso eliphantsi kunye nezisombululo.
Le nkampani Iyakwazi bahlutha ubugcisa ezininzi isitshixo kwaye esitsha kwicandelo lonikezelo 10KV esizisebenzelayo. It has ulwazi olunzulu lwe Ubhaqo nandzu nomgwebo phantsi kweenkqubo ezahlukeneyo isiseko cala, kwaye Imida algorithm nandzu nokuzimisela processing lwangaphakathi nolwangaphandle. Le nkampani ke nobuchule omkhulu izicelo FPGA lwenkqubo, izicelo ezivela-8-bit microcontrollers ukuya ekupheleni ophezulu ARM, DSP kunye nezinye iziqhubekisi bit-32. Le nkampani oluhlala amava atyebileyo kwaye igcina inqanaba eliphezulu Vxworks engoma, linux, ucos iqonga yophuhliso inkqubo, iqonga yophuhliso DSP kunye nemveliso grade-mveliso yoyilo EMC hardware. Okwangoku, imveliso yaye yaveliswa yinkampani zigqithile Uvavanyo olusesikweni-National Academy of Electric Power, i 2014/2015 Network National Standard New Special Test, indlela-emibini oluNgabonakaliyo Certification Test, i-National Network kunye Network South protocol akahambelani Test, EMC Uvavanyo kunye nezinye izitifiketi. design product Le nkampani ithobela IEC60870-5-101 okanye 104, DPN3, modbus kunye nezinye iprotocol.
Le nkampani luhlala kunye nohlobo kuphuhliso lobuxhakaxhaka kwishishini amandla ukusasazwa China kunye nehlabathi, kwaye rhoqo uhlaziyo kunye nokuphucula iimveliso. Ukuthatha "ne technology undoqo, izinto ezintsha kwenza uthungelwano ukwabiwa ekrelekrele" njengoko kwakungamandla awayeqhuba, inkampani kusoloko kulandela bulumko ishishini "yoxinaniso kwi lobungcali, ukunyaniseka kuqala" yaye "umgangatho isiseko ukusinda lwamashishini, ingqibelelo lo ubomi uphuhliso lwamashishini, inzululwazi kunye ezintsha ungamandla eziqhuba inkqubela lweshishini, inkonzo ebalaseleyo ke usisiqinisekiso share kwemarike, ubufumane-win injongo lukho kwishishini ". Ngokusekelwe kwi-technology esizisebenzelayo ezikhoyo, inkampani ngamandla ikhuthaza kuphando ubuchwepheshe yokuqala neyesibini izixhobo uhlanganiso kushishino ngamandla, kwaye isebenzela ukwakha izinto zasekhaya ngamazwe distribution esizisebenzelayo okrelekrele terminal uphando imveliso kunye nophuhliso isiseko sikhulu kakhulu professional kwimveliso ukuba negalelo ekuqondweni ngokubukekayo, ephephile, namandla kwaye uzinze Isixokelelwano sokusasazwa e China kunye nehlabathi. kwakhona comprehensive ly ulawulo lwe-eneji ubeko endle amandla amatsha kunye nophando, ukuphuhlisa nokukhuthaza namaqonga data big Internet. Ukuze uqonde isicwangciso China nesexesha 2025, inkampani rhoqo ochitha phezulu-zobugcisa, gqolo inceda ushishino umyalelo onengqondo kwaye izama ukwenza "TENPRO" ibe yinkokeli shishino of "Made in China 2025" imveliso qhinga olomeleleyo lizwe.